लिभरपुलमा साक्षात्कार गर्न आउंदैछिन् बेनी रानी | We Nepali
लिभरपुलमा साक्षात्कार गर्न आउंदैछिन् बेनी रानी
२०७२ साउन २३ गते ०:२९
लन्डन । एक जना प्रेरणादायी नेपाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आगामी १४ अगष्ट शुक्रबार लिभरपुलमा साक्षात्कार गर्न आउने भएकी छिन् । लिभरपुलस्थित जोन मुर युनिभर्सिटीमा उनले दिने मन्तव्य धेरैलाई चासोको विषय छ । विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागले गर्ने उक्त कार्यक्रमका लागि डा. के स्ट्याण्डिङ र डा. सारा पार्कर लागिरहेका छन् ।
बेनी रानी घले धादिङमा जन्मिइन् । पढ्दा पढ्दै उनले प्राथमिक शिक्षा त्याग्नु पर्यो र परिवारलाई सघाउन थालिन् । १२ वर्षको कलिलो उमेरमै उनलाई बिहेका लागि दवाव दिइयो । त्यो क्षण उनका लागि बडो पीडादायी रह्यो । १३ वर्ष टेक्दै गर्दा उनले पर्यटकका भारी बोक्ने काम गरिन् । त्यही बेला उनलाई साक्षर हुनुको महत्व झन् बढि अनुभूति भयो । जिन्दगीमा धेरै उतार चढाव खेपिन् उनले । विभिन्न अप्ठेराका बाबजुद बेनी रानी केही शिक्षा लिन तल्लीन भइन् ।
टिनएजका बेला उनले हिमालयन हेल्थ केयर अर्गनाइजेशनमा काम गर्ने अवसर पाइन्, जहांबाट बेनी रानीले स्वास्थ्य समस्या र नेपालको दुर्गम गाउंमा यसको प्रभावबारे बुझ्न पाइन् । यसले उनलाई समाजको वृहत्तर हितका लागि काम गर्न प्रेरित गर्यो । केही वर्ष अघि उनले आफ्नो जिल्लाका अन्य महिलासंग मिलेर गाउंमा रिसाइकल गर्न मिल्ने घांसको बास्केट उत्पादन शुरु गरिन् र गाउं तथा विश्व बजारमा विक्री वितरण हुन थाल्यो । यसले तीनसय महिलालाई आम्दानीको श्रोत बन्न पुग्यो । बेनी रानीले लैंगिक हिंसा, यौन बेचविखन, वाल विवाह विरुद्ध कार्य गर्न एवं महिला स्वास्थ्य र स्कुल छाडेका स साना वालवालिकाका पक्षमा काम गर्न झन् साथ पाइन् । अनि उनलाई एउटा संस्था खोल्न उत्प्रेरित गर्यो । उनको बेनी ह्याण्डीक्राफ्ट महिला सशक्तिकरणका लागि उदाहरणीय संस्था बनेको छ अहिले ।
बेनी रानीले हालै भूकम्पका बेला पीडितहरुको राहत कार्यमा गरेको योगदान पनि स्मरणयोग्य छ ।
उक्त सेमिनारमा बेनी रानीलाई अझै बुझ्न सकिने आयोजकले जनाएका छन् ।